Ejipta: Fanoherana an-dahatsary ny 25 Janoary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2011 13:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, Shqip, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, srpski, 日本語, English
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny fitaterana manokana momba ny Fihetsiketsehana 2011 any Ejipta.
Maro amin'ny mpitazana no mahatsikaritra fa tsy milaza na inona na inona momba ny fihetsiketsehana ny mpamoaka vaovao be mpanaraka. Ny tati-baovao nataon'ny Aljazeera manokana dia kely dia kely tokoa. Ny olo-tsotra tia mitati-baovao no mamoaka lahatsary maro avy any anatin'ny fihetsiketsehana ho hitan'ny mpiserasera.
Tafaray tsikelikely ny olona an-jatony nivorivory tamin'ny toerana maro ary nihabetsaka ka lasa vondron'olona zavontany milahatra an-dalam-be izay naharobaka ny fefy olona nataon'ny polisy araka ny hita amin'ny lahatsary navoakan'i lukasjakubicka:
Niainga am-pilaminana ny fihetsiketsehana araka ny hita amin'ity lahatsary ity (tsy misy feo) navoakan'i ramzyam izay nilaza ny heviny hoe:
Ity lahatsary manaraka navoakan'i no2again, ity dia ahitana mpanao fihetsiketsehana mihiaka milamina hoe: “Miala, miala i Hosni Mubarak!” sy ny “Filaminan'ny Firenena? Filaminan'ny Firenena? Tsy misy ny filaminana ary tsy misy ny firenena!” ankoatra ny hiaka hafa:
Voatatitra avy eo fa nalahatra nanerana ny tanànan'i Kairo, renivohitra, ny polisy misahana ny rotaka mba entina hanindriana ny mpanao fihetsiketsehana araka izay asehon'ny lahatsarin'i motherofthetribe:
Tsy ela dia re nisongadina ny fifandonana nifanaovana tamin'ny polisy misahana ny rotaka. Ity lahatsary ity dia navoakan'i Midogonpapa:
Ao amin'ny lahatsary, navoakan'i MFMAegy, ity no ahitana tovolahy mijoro eo anoloan'ny fiarabe mpitifitra amin'ny rano, tahaka ny tamin'ilay tovolahy nibahahana ny tank tao amin'ny kianjan'i Tiananmen, mibahana ny fiarabe tsy hanenjika ny mpanao fihetsiketsehana:
Ity lahatsary, asehon'i MrPeopleNews, ity dia mampahatsiahy ny nataon'ny mpanao fihetsiketsehana Toniziana nandrovitra ny sarin'ny filohany:
Hita miverimberina amin'ny faritra maro manodidina an'i Kairo ny tranga tahaka io, araka ny asehon'ny lahatsarin'i Ba7ary:
Ny takarivan'ity andro ity, tafangona teo an-kianjan'i El-Tahrir eo afovoan'i Kairo, hodidinin'ny polisy misahana ny rotaka, ny mpanao fihetsiketsehana. Hoy ny hiakany hoe “Te-hanala ity fitondrana ity ny vahoaka” araka ny hita ao amin'ity lahatsary ity, izay navoakan'i nadiaharoun: